China Suspension System Cabin Shock Absorber Oem- Z11063 mpanamboatra sy mpamatsy | TANGRUI
Ny rafitra fampiatoana ny kabine Shock Absorber Oem- Z11063
INONA NO ATAON'NY MPITONDRA SHOCK?
Ny mpitroka tohina dia singa azo antoka amin'ny fiarovana izay mety hisy fiatraikany amin'ny famonoana ny kodiarana, ny fitoniana, ny frein, ny hovitrovitra, ny fampiononana ny mpamily, ary ny ain'ny faritra familiana sy fampiatoana hafa.
Ireo fiasa lehibe izay ataon'ny baomba
Fehezo ny hetsika lohataona
Ny Shocks dia miasa miaraka amin'ny rafitra fampiatoana kamio fivarotana mba hitazonana ny fifandraisana amin'ny kodiarana amin'ny alàlan'ny fifehezana ny hetsika lohataona.
Miaro ny loharano sy kitapo rivotra
Miasa miaraka amin'ny loharanon'ny kamio ara-barotra ny kitapo - raha malemy ny iray dia ho entin'ny akanjo haingana ilay iray hafa.
Ampio hitazona ny kodiarana hifandray amin'ny arabe
Ny fitazonana ny fifandraisana amin'ny kodiarana mafy dia mafy amin'ny familiana, ny fikirakirana ary ny fifehezana ny enta-mavesatra.
Manome fiatoana fanitarana ho an'ny fampiatoana ny rivotra
Raha mihoatra ny fetra fanitarana dia mety hiteraka fahavoazana amin'ny lohataona rivotra sy ny kamio.
Ovao ho hafanana ny hetsika
Ireo dampers mora tohina haingam-pandeha ireo dia manova ny angovo kinetika vokarin'ny hetsika fampiatoana ho lasa angovo hafanana, izay miparitaka amin'ny alàlan'ny tsiranoka hydraulic.
Nihena ny vidin'ny iray kilaometatra
Ny fikorontanana miasa tsara dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fandaniana amin'ny alàlan'ny fanitarana ny fiainana kodiarana, mampihena ny reraka sy ny triatra amin'ireo singa hafa ary miaro ny fampiasam-bola ataonao. Rehefa misolo ny lohataona efa rovitra dia tadidio ny manolo ny fahatairana efa tonta.
NAHOANA NO MITSANGATRA NY MPITONDRA SHOCK?
Ireo mpandraharaha fiara ara-barotra dia mety tsy hahalala ny fitafiana hatairana tampoka rehefa mandeha ny fotoana. Ny kitapom-batsy dia tokony hozahana matetika sy hosedraina amin'ny alàlan'ny fikolokoloana kamio.
Antony fanaovan-tsampona ny fiara mpitondra fiara:
Faharatsiana amin'ny alàlan'ny fandidiana mahazatra
Ny kilaometatra isaky ny fandidiana dia mitentina hetsika hetsika 1.750.
22 tapitrisa ny tsingerina mitranga - amin'ny salan'isa - 12.425 kilometatra / 20.000 km
Hetsika 88 tapitrisa no miseho - eo ho eo - amin'ny 49 700 kilaometatra / 80,000 km
Kitapo 132 tapitrisa no miseho - eo ho eo - amin'ny 74,550 kilometatra / 120.000 km
Fivoaran'ny tsiranoka Hydraulika
Rehefa mandeha ny fotoana, very ny viscosity ny ranon-drivotra anatiny, manimba ny fahafahan'ny singa hampihena ny fiantraikan'ny arabe.
Ny fahasimban'ny singa manaitra
Ireo singa ao anaty mpitroka tampoka dia vita amin'ny vy, fingotra ary plastika, izay mihena amin'ny alàlan'ny fampiasana lava, hafanana be, ary ny toe-piainana ratsy sy ratsy.
Famaritana ny mpanome tolotra mendrika
Tsy ny soritr'aretin'ny fiharatsian'ny fahatairana dia mora hita; aorian'ny fizahana tsara, ny mpikarakara serivisy mahay dia mety hamaritra ny hatairan'ny kamio raha toa ka mila soloina ireo singa ireo.
Brand Ho an'ny CADILLAC CTS
Previous: Fiatoana mihantona aorinan'ny rivotra any ankavanana- Z11062
Manaraka: Wholesale Car Front Shock Absorber-Z11064
Tangrui steering knuckle mety ho an'ny MAZDA-Z1620
Auto faritra mifehy sand Ball mitambatra ho an'ny NISSAN-Z1 ...
Angletera karazana fampiatoana alohan'andriana ankavia ankavanana B ...
Ny valin'ny kodia kodiarana dia mahaliana ho an'i Nissan-Z ...
Fiatoana mihantona eo aloha Strut Shock-Z11065
Hub an'ny kodia eo alohan'ny fiara ho an'ny Toyota-Z8048
Hood Shock Absorber, Knuckle familiana eo aloha, Hub misy kodiarana, Shock Absorber Bolt, Tyre Ball Joint, Shock Absorber fingotra,